लामो समय यौ’ न, स’ म्पर्क नगरे शरीरमा आउँछ यस्तो परिवर्तन – NepalajaMedia
January 21, 2021 242
यो विषय विवाहित र अविवाहित सबैका लागि लागू हुन्छ । विवाहित व्यक्ति पनि सधैं शा८ रिरीक स८ म्पर्क गर्न सक्षम हुनसक्छन् भन्ने हुँदैन । तर, तपाईंले कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ कि लामो समयसम्म यौ८ न सम्पर्क नराख्दा श८ रीरमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ भनेर ?
यो आलेखमा लामो समययौ८ न स८ म्पर्क नगर्दा मानिसमा हुने शारिरीक तथा मानसिक परिवर्तनबारे उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयसम्म यौ८ न स८ म्पर्क नगर्दा तपाईंमा हुने अर्को परिवर्तन हो, कामेच्छासँग सम्बन्धित । लामो समयसँग यौ८ न स८ म्पर्क नगरेका व्यक्तिमध्ये कसैमा धेरै कामेच्छा (यौ८ न चाहना) जागृत हुन्छ भने कुनै व्यक्तिमा धेरै कम हुन्छ अर्थात् घटेर जान्छ ।
तपाईंलाई धेरै थकाइ लाग्छ भने यसको एक कारण लामो समयसम्म यौ८ न स८ म्पर्क नगर्नु पनि एक हुन सक्छ । अर्थात् नियमित यौ८ न स८ म्पर्क गर्ने व्यक्तिले लामो समयसम्म यौ८ न स८ म्पर्क गरेनन् भने यस्ता व्यक्तिमा मानसिक दवाव र थकान महसूस हुने संभावना बढेर जान्छ ।
तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ कि, तपाईंको सामान्य रुघा–खोकी कहिलेकाहीँ यौ८ न स८ म्पर्क गर्दा नै ठीक हुन सक्छ । यौ८ न स८ म्पर्कले तपाईंलाई शारिरीकसँगै मानसिक रुपमा पनि सक्रिय बनाउँछ, यस्तो अवस्थामा तपाईंमा इम्युनिटी पावर (प्रतिरोधात्मक क्षमता) बढेर जान्छ । जसका कारण सामान्य खोले बिमारीबाट से८ क्स गर्दा पनि छुट्करा पाइन्छ ।
गो८ प्य अ८ ङ्गमा सं८ क्र मण
तपाईंलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ कि, लामो समय यौ८ न स८ म्पर्क नगर्दा तपाईंको गो८ प्य अं८ ग (यौ८ नाङ्ग)मा सं८ क्रमण हुन्छ भनेर, तर एक रिसर्चले यसलाई प्रमाणित गरेको छ । लामो समयसम्म यौ८ न सम्पर्क नगर्नु भनको यौ८ नाङ्गको सक्रियता कम हुनु हो । सक्रिय हुन नपाएपछि यौ८ नाङ्ग कमजोर हुन्छ ।
एक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म यौ८ न स८ म्पर्क नगर्ने महिलाको यौ८ नाङ्गको छाला कमजोर र पातलो हुन जान्छ । जसले गर्दा यौ८ नाङ्गमा सं८ क्रमण हुने खतरा पनि बढी हुन्छ ।
Prevकोरोना खोप उत्पादन गरिरहेको भारतीय इन्स्टिच्युटमा भी’षण आ’गलागी
Nextअति नै मा,र्मिक कथा मन थामेर न,रोई पढ्नुहोला ! अरुलाई पनि पढ्ने मौ,का दिनुहोला